Jamhuuriyada Somaliland Golaha Wakiilada - Free PDF
Jamhuuriyada Somaliland Golaha Wakiilada-Free PDF
Date:27 Feb 2020
Share Pdf : Jamhuuriyada Somaliland Golaha Wakiilada
Download and Preview : Jamhuuriyada Somaliland Golaha Wakiilada
Report CopyRight/DMCA Form For : Jamhuuriyada Somaliland Golaha Wakiilada
HoR RULES OF PROCEDURE 2006,HoR RULES OF PROCEDURE 2006. JAMHUURIYADA SOMALILAND,GOLAHA WAKIILADA,XEER HOOSAADKA GOLAHA WAKIILADA. STANDING RULES,GOLAHA WAKIILADA JAMHUURIYADA SOMALILAND. Markuu arkay Qodobka 9aad Qodobada 37 ilaa 56,Qodobada 74 ilaa 79 iyo Qodobka 129 aad ee. Markuu tixgeliyey Jamhuuriyada Soomaaliland oo,qaadatay nidaam ku dhisan talo wadaag iyo.
Dimuquradiyad aan ka hor imanayn shareecada,Markuu aqoonsaday In Golaha Wakiiladu uu ku yimi. qaab doorasho xalaal ah ayna waajib tahay inay, hawlahooda u fuliyaan hab aan muran iyo mugdi geli. Markuu wax ka bedel Kaabid Ku sameeyey Xeer,hoosaadkii hore ee Golaha Wakiilada ee 14 9 1998. Wuxuu Soo Saaray Xeer Hoosaadkan,HoR RULES OF PROCEDURE 2006. Qodobka 1 aad,Macnaha ereyada, Xeer hoosaad Waxa loola jeedaa Xeer u gaar ah Golaha Wakiilada oo habaynaya.
sida Goluhu u gudanayo xilkiisa iyo awoodaha Dastuurka iyo Xeerarku u jideeyeen. Qolalka Shiraraka Waxaa loola jeedaa qol weynaha main hall shirka ee Golaha. iyo Qolalka kale ee guddiyadu ku shiraan, Shir guddoon Waxaa loola jeedaa Gudoomiyaha Golaha iyo llabadiisa ku xigeen. oo wada Jira, Guddi hoosaad Waxaa loo jeedaa guddiyo Golaha laga dhex magacaabay oo hawl. gaar ah qaabilsan, Dastuurka Waxaa loola jeedaa Dastuurka Qaranka ee JSL. Go aan Waxaa loola jeedaa wax kasta oo markii loo codeeyey aqlabiyada Goluhu. isku raacay, Fadhi shir Waxaa loola jeedaa kulan kasta oo kooram ku furma oo ay yeesheen. Goluhu ama Guddi hoosaadyadu, Xoghaynta Golaha Waxaa loola jeedaa shaqaalaha Golaha Wakiilada ka shaqeeya.
oo uu hormoodka u yahay Xoghayaha Guud, Hadal Qoraal Waxaa loola jeedaa qoraal xoghayntu ka reebto doodaha. go aanada baaqyada iwm ee Golaha ka soo baxa, Fadhi xidhan Waxaa loola jeedaa fadhiyada aan loo ogolayn dhegaystayaasha. saxaafadda iyo martida kale toona, Fadhi furan Waxaa loola jeedaa fadhiyada Golaha ee dhegaysigiisa ka qaybgeli. Karaan dhegaystayaal, Mashruuc sharci Waxaa loola jeedaa soojeedin sharci qabyo ah oo u furan dood iyo. Wax ka bedel Bill Of Law, Kooram Waxaa loola jeedaa tirada xubnaha mudaneyaasha Goluhu sifo sharci ah.
uu ugu furmi Karo fadhi Gole waxaana ugu yar tirada guud ee Golaha badhkood. iyo hal marka laga reebo kuraasta bannaanshahooda la baahiyey. Mudaneyaasha cusub Waxaa loola jeedaa mudaneyaasha ku yimi doorasho Xalaal. ah oo dimuquraadi ah, Mudane Waxaa loola jeedaa xubin ka tirsan Golaha Wakiilada lab dhedig. Fadhi gaar ah Waxaa loola jeedaa fadhiga ugu horeeya ee Golaha Wakiilada. HoR RULES OF PROCEDURE 2006, Soojeedin motion Waxaa loola jeedaa soojeedin rasmi ah oo uu soojeediyo. mudane ama Mudaneyaal si looga doodo go aana looga gaadho. Toosin Point of Order Waxaa loola jeedaa soo dhexgelida hadal mudane wato si. loo waafajiyo sharciga, Aqlabiyad fudud Simple Majority Waxaa loola jeedaa codka lagu ansixiyo. haldheeri tirada kooramka ee ugu yar, Aqlabiyad Buuxda Absolute Majority Waxaa loola jeedaa codka lagu ansixiyo. kala badhow badh iyo hal tirada guud ee xubnaha guud ee Golaha marka laga. reebo kuraasta bannaanshahooda la baahiyey,Qodobka 2 aad.
Tilmaamaha guud ee Golaha Wakiilada, 1 Golaha Wakiiladu waa qaybta koowaad ee sharci dejinta dalka waana. Wakiilada dad weynaha, 2 Golaha Wakiiladu wuxuu ka kooban yahay laba iyo sideetan 82. xubnood oo lagu soo doorto doorasho guud oo toos ah iyo codbixin qarsoodi ah oo. 3 Afka loo isticmaalayo shaqada iyo doodaha Golaha waa Af soomaali. afka labaadna waa af Carabi afafka kalena waa la adeegsan karaa markuu Goluhu u. 4 Xarunta Golaha Wakiiladu waa magaalo madaxda dalka ee Hargeysa. 5 Astaanta Goluhu waa geed uu hoos yaalo rixle kitaab fidsani dulyaalo. 6 Muddada Goluhu waa shan 5 sanno oo ka bilaabma maalinta. Maxakamadda Sare ku dhawaaqdo natiijada kama dambaysta ah. Qodobka 3 aad,Waajibaadka Golaha Wakiilada,Waajibaadka Golaha Wakiiladu waa sidan. 1 Goluhu wuxuu u xilsaaran yahay dejinta hubinta dhawrista sharciyada. dalka iyo la xisaabtanka xukuumadda iyo hay adeheeda. 2 Doorashada Guddoomiyaha Golaha Wakiillada iyo ku xigeennadiisa. 3 Dejinta Xeer hoosaadka Golaha iyo ansixintiisa, 4 Ansixinta miisaaniyad sannaddeedka iyo xisaab xidhkeeda. 5 Ansixinta ama diidmada Wasiirrada Wasiir ku xigeennada iyo Madaxda. kale ee Qaranka, 6 Ansixinta ama diidmada madaxda hay addaha dawladda ee madaxa.
bannaan oo ay ka mid yihiin,Xeer ilaalinta Guud,HoR RULES OF PROCEDURE 2006. Hanti dhawrka Guud,Hay adda Shaqaalaha Dawladda,Baanka Dhexe. 7 Ansixinta Xeerarka Hay ad kasta oo madax bannaan ama qaran oo la. dhisayo ama dhisan, 8 Ansixinta madaxda sare ee dawladda ee Xeer Golaha Wakiilada ka soo. baxay jideeyay, 9 Magacaabidda guddiyo baadha dhacdooyinka ka yimaada hay adaha. dawladda haddii loo baahdo, 10 Ansixinta heshiisyada caalamiga ah iyo heshiisyada kale ee dalka u.
keenaya culays maaliyadeed oo aan miisaaniyadda ku soo aroorin ee ay. xukuumaddu la gasho dawladaha kale iyo shirkadaha caalamiga ah ama wadaniga. 11 Ansixinta mashruuc sharci ee ay soo gudbiso Xukuumaddu Guurtidu. ama ay keenaan mudanayaal Golaha ka tirsan, 12 Kala qaybgalka Golaha Guurtida fadhiyada Dastuurku jideeyey. 13 Golaha wakiiladu wuxuu u gudbinayaa Golaha Xukuumadda talooyin. iyo tilmaamo ku saabsan hogaaminta siyaasadda guud ee dalka. 14 Guddiyada Golaha Wakiiladu waxay awood u leeyihiin in ay wasiirada. ama madaxda hay addaha dawladda ama madaxda sare ee kale ee qaranka ee. hawshoodu khusayso ay wax ka weydiiyaan gudashada xilkooda xogta ay helaan. iyo soojeedintoodana Golaha ay horkeenaan, 15 Goluhu wuxu awood u leeyahay jideynta canshuuraha iyo talaabooyinka. kale ee kor loogu qaadayo dakhliga, 16 Waxa kale oo Goluhu awood u leeyahay dhammaan awoodaha uu siiyay. Dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka,Qodobka 4 aad. Waayidda Xubinnimada Golaha Wakiilada,HoR RULES OF PROCEDURE 2006.
Xubinimada golaha waxa lagu waayi karaa sida soo socota. 2 Istiqaalad qoraal ah Goluhuna ka oggolaaday, 3 Ka maqnaansho Golaha labaatan 20 fadhi oo isku xiga idin la aan. 4 Xil gudasho la aan joogto ah sida, b Xiskiisa oo wax u dhinmaan Waalli taas oo loo baahan yahay inay soo. caddeeyaan guddi dhakhaatiir ah oo la aqoonsan yahay. t Caafimaad darro joogto ah ama awood beelid uusan xilka la gudan. Karin taas oo ay soo caddaynayaan guddi dhakhaatiir ah oo la aqoonsan yahay. 5 Xukun ciqaabeed kama dambays ah sida ku cad Dastuurka. Qoddobka 5 aad,Buuxinta Jagada Golaha Wakiilada, Haddii ay bannaanaato jago Xubin ka mid ah Golaha Wakiilada waxa loo soo. buuxinayaa si waafaqsan xeerka doorashada Golaha Wakiilada. Qodobka 6 aad,Nabad gelyada Madasha Shirka, 1 Dhawrista nabad gelyada Golaha waxaa u xilsaaran Gudoomiyaha Golaha oo. markii loo baahdo adeegsan kara hawl wadeennada nabadgelyadda. 2 Waxaa reeban in qofna la soo galo hub madasha shirka Golaha Wakiilada ama. xafiisyada Golaha Qofkii la soo gala waxaa laga qaadayaa talaabo sharciga. 3 Ciidamada nabad gelyadu ma soo geli karaan madasha shirka iyo xafiisyada. Golaha Wakiilada hadaan Gudoomiyuhu dalban, 4 Cidda ka baxsan xubnaha Golaha Wakiiladu ma soo geli karto madasha shirka.
iyo xafiisyada Golaha hadaan loo ogolaan, 5 Xubnaha Golaha iyo goob joogayaashu waa inay demiyaan moobilada. Telefoonda Gacanta iyo qalab kasta oo carqaladayn kara ismaqalka fadhiga. Golaha mana bannaana in lagu cabbo sigaar laguna cuno qaad ama cunto. HoR RULES OF PROCEDURE 2006,Qodobka 7 aad,Dadka loo ogolaaday Fadhiga. 1 Dadka loo ogolaaday inay dhegaystaan madasha shirka waxay fadhiisanayaan. meesha loo cayimay iyaga oo aamusan looma ogola inay muujiyaan astaamo. ogolaansho ama diidmo midna, 2 Shaqaalaha Goluhu iyaga oo fulinaya amarka Gudoomiyaha waxay si deg deg. ah uga saarayaan madasha shirka cidda khilaafta nidaamka shirka. 3 Dhegeystihii geysta af lagaado wax u dhimaysa sharafta Golaha Wakiilada ama. xubin ka mid ah mudanayaasha waxaa lagu xidhayaa amarka Gudoomiyaha. waxaana lagu wareejinayaa ciidanka booliiska si talaabada ku habboon looga qaado. Qodobka 8 aad,Kalfadhiyada Golaha Wakiilada, 1 Sida ku cad qodobka 46aad ee Dastuurka Goluhu wuxuu yaalanayaa. saddex kal fadhi oo caadi ah sannadkiiba oo gaadhaya muddo siddeed iyo labaatan. 28 todobaad ah Labadii kal fadhi waxa u dhexaynaaya ugu yaraan afar 4. todobaad ugu badnaanna siddeed 8 todobaad oo ah fasax. 2 Kal fadhiga aan caadiga ahayn ee Golaha Wakiilladu wuxuu ku. qabsoomi karaa,b Codsi ka yimaada Madaxweynaha JSL.
t Guddoomiyaha Golaha Wakiilada oo isugu yeedha, j Saddex meeloodow meel 1 3 tirada xubnaha Golaha Wakiilada oo. qoraal ku codsada, 3 Kal fadhigiisa ugu horeeya waxa Golaha Wakiiladu ku ansixinayaa xeer. hoosaadkiisa wuxuna ku dhisanaya guddi hoosaadyo inta uu u baahdo. 4 Khudbadda qaranka waxa jeedinaaya Madaxweynaha kal fadhiga ugu. horeeya sannad walba waxaanay ka war bixinaysaa,Siyaasadda barnaamijyada dawladda dhaqaalaha. xaaladda lacageed xaaladaha nabadgelyada dalka iyo wax qabadkii xukuumadda. ee sanaddkii dhammaaday,Qodobka 9 aad,Hawlaha Fadhiyada. HoR RULES OF PROCEDURE 2006, 1 Fadhi kasta marka la akhriyo Aayadaha Quraanka Kariimka ah waxay hawshu.
ku soconaysaa sida ajendaha lagu diyaariyay, 2 Mudnaanta kowaad waxaa leh qodobka aan anjendaha ku jirin sida soojeedinta. Gudoomiyaha qoraalada soo gaadhay Golaha codsiyada ogeysiinta soojeedinada. 3 Jawaabihii ka soo noqday su aalihii la weydiiyay xukuumadda. 4 Intaas kadib waxaa la bilaabayaa qodobada anjendaha sida ay u kala. horeeyaan haddii aan Gudoomiyaha Goluhu si kale u soo jeedin. Qodobka 10 aad,Fadhiga ugu horreeya ee Golaha Wakiillada Cusub. 1 Fadhiga ugu horeeya ee Golaha Wakiilada cusub waa fadhi gaar ah. wuxuuna qabsoomayaa maalinta madaxweynuhu u muddeeyo soddon 30. maalmood gudahood laga bilaabo maalintii ay maxakamada sare ku dhawaaqday. natiijadii doorashada ama maalinta shan iyo afartanaad 45 oo xubnaha Golaha. cusubi iskood isugu yimaaddaan kana soo qaybgalaan fadhigaa Saddex meeloodow. laba meelood 2 3 ugu yaraan tirada guud ee xubnaha Golaha Wakiilada ee cusub. 2 Waxa fadhiga xubnaha Golaha Wakiilada ee cusub furaya. Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo isla markaana dhaarinaya xubnaha Golaha. Wakiilada ee cusub, 3 Shirkaas waxa Gudominaya dhaarta ka dib mudanaha ugu da da weyn. xubnaha Golaha cusub waxana lagu dooranayaa isla fadhiga maalintaas. Guddoomiye iyo laba Guddoomiye ku xigeen G X 1aad iyo G X 2aad. Qodobka 11 aad, Xubin kasta oo ka mid ah mudanayaasha Golaha Wakiilada inta aanu xilka qaban. waxa uu marayaa maraysaa dhaarta ku xusan qodobka 129 aad ee Dastuurka. Qaranka oo ah sidan, Waxaan Illaahay ugu Dhaartay inaan u noqonayo Daacad diintayda Islaamka ah.
Dalkayga Soomaaliland Dadkiisana ku Maamulayo Sinnaan iyo Caddaalad. HoR RULES OF PROCEDURE 2006,Qodobka 12 aad, Hannaanka Doorashada Gudoomiyaha Labada Gudoomiye xigeen. 1 Xubnaha u sharaxan jagooyinka Gudoomiyaha ama Gudoomiye ku. xigeenada G X 1aad iyo G X 2aad waa inay codsigooda ugu soo gudbiyaan. gudoonka shirka qoraal ahaan kaas oo ay ku cadaynayaan musharaxnimadooda iyo. mid kasta jagada uu u tartamayo, 2 Musharaxiinta u tartamaya Gudoomiyaha iyo ku xigeenada Golaha. cusub jago kasta waa inaanay ka badnayn saddex 3 xubnood oo ku yimaada soo. jeedinta mudanayaasha saddexda xisbi qaran oo si dumuquraadi ah uga soo. tartamay xisbiyada dhexdooda, 3 Hannaanka doorashada Gudoomiyaha iyo ku xigeenadu waa gacan taag. wuxuna codkaasi ku ansaxayaa haldheeri aqlabiyada fudud. 4 Ugu horeyn waxaa loo codeynaya Gudoomiyaha Golaha cusub. natiijadana waxaa ku dhawaaqaya Gudoomiayaha Shirka. 5 Marka la doorto Guddoomiyaha Golaha ee cusub hogaaminta fadhiga. Golaha waxa la wareegaya Gudoomiyaha Golaha isaga ayaana hagaya u codeynta. Gudoomiye xigeenada 1 aad iyo 2 aad isla fadhigaas. Qodobka 13 aad,Fadhiyada Golaha, 1 Fadhiyada Goluhu waa kuwo furan ama xidhan Fadhiga Goluhu wuxuu ku. ansaxayaa markay madasha fadhiyaan tirada guud ee Golaha badhkeed oo lagu. daray hal ama in ka badan marka laga reebo kuraasta bannaanashahooda la. 2 Go aamada Goluhu waxay ku ansaxayaan haldheeri aqlabiyad fudud marka. laga reebo arrimaha Dastuurka ama xeer hoosaadka Goluhu aqlabiyad kale u. 3 Fadhiyada Goluhu waxay noqon karaan qaar xidhan marka Shir guddoonku. go aansado in xaalad ka mid ah xaaladaha soo socda laga doodaayo. HoR RULES OF PROCEDURE 2006,b Dood la xidhiidha nabadgelyada heer qaran.
t Khilaaf ka dhex oogma Golaha dhexdiisa ama Golayaasha dhexdooda. j Arrin la xidhiidha anshaxa oo Guddida joogtadu baadhitaan ka dib u bandhigtay. Shir guddoonka Shir guddoonkuna u arkay in xal u raadinteedu ku habboon tahay. go aan Golaha ka soo baxa, x Marka toban iyo kow 11 mudane soo jeedin qoraal ah soo gaadhsiiyaan Shir. gudoonka Goluhuna ka oggolaado, Kh Markay Shir guddoonka la habboonaato Goluhuna ka ogolaado. 4 Fadhiyada kale waa kuwo furan waxaana loo ogol yahay dhegeystayaal sida. saxaafadda dadweynaha iyo martisharaf kale iyaga oo fadhisandoona goobo loo. 5 Dib u dhigidda fadhigu wuxuu ku ansaxayaa aqlabiyad fudud waxana dib loo. dhigi karaa ugu badnaan toddoba 7 maalmood, 6 Wasiirada iyo Wasiir ku xigeennada waxa ku waajib ah in ay ka qayb galaan. fadhiyada Golaha Wakiillada iyo Guddiyadiisa haddii qoraal lagaga codsado sidaa. waxayna xaq u leeyihiin in ay ka, qayb qaataan doodaha hase yeeshee xaq uma laha codayn sidoo kale. Madaxweynaha waxaa bannaan in uu u wakiisho ku xigeenkiisa ama Wasiir ka. xigeenada G X 1aad iyo G X 2aad waa inay codsigooda ugu soo gudbiyaan gudoonka shirka qoraal ahaan kaas oo ay ku cadaynayaan musharaxnimadooda iyo mid kasta jagada uu u tartamayo 2 Musharaxiinta u tartamaya Gudoomiyaha iyo ku xigeenada Golaha cusub jago kasta waa inaanay ka badnayn saddex 3 xubnood oo ku yimaada soo
Annual campus buzz 2014 international institute of
An updated version of this multi material handbook pdf
Open access case series prise en charge des corps
Holley carburetor parts walker products
Cfd simulation using fluent to determine the heat transfer
Customer segmentation of bank based on data mining
JAMHUURIYADDA SOMALILAND XEERKA NIDAAMKA GARSOORKA
MOVING TO THE MUSIC XTEC
A Review of the Breathing Mechanism for Singing
The Dynamics of Tibetan Singing Bowls correction
PORTABLE DUAL BAND MOBILE PHONE
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL WordPress com